Haweeney Isku Badashay Dooro! | Xaqiiqonews
Haweeney Isku Badashay Dooro!
Dhaqaatiir ku sugan wadanka Biljam ayaa la wareersan xaaladda haweeney la arkay iyada oo u dhaqmeysa sida digaaga, gacmaheeda ayey u dhaqaajineysa sida baalal oo kale, waxa ay ku codeyneysaa sida codka diiqa.
Xaqiiqonews- Layaabka dunida
Dhaqaatiirta ayaa aaminsan haweeneyda in ay la dhibaatooneyso cudur maskaxeed ay ka qaaday walwalka ka dhashay geerida mid ka mid ah xubnaha qoyskeeda.
Haweeneyda ayaa qaban jirtay shaqo caadi ah, iyada oo ka shaqeyn jirtay farmashi ka hor inta aysan qaadanin nasasho hal sano, waxaana sanad ka dib ay ku laabatay shaqada iyada oo caadi h, mana jirto maan dooriyaal ama daroogo ay isticmaali jirtay ka hor inta aan lagu arkin cudurkan.
Sidoo Kale Aqri..Wixii Hore Oo Dhan Ka Daran..Waa Tee Naagta Gaduudan
Haweeneyda bukaanka ah ayaa dhaqaatiirta u sheegtay in dareemeysa xanuun dhanka lugaha iyo gacmaha, waxa ayna sheegtay in ay isku maleyneyso in ay dooro tahay.
Markii au cudurkan ka bogsatay ka dib, ma aysan soo xasuusan dhaqankeedii digaagadda camal ahaa, waxa ayna dareentay xishood iyo yaqyaqsiimo markii qoyskeedu u sheegeen dhacdada.
Sida ay ku doodayaan dhaqaatiirta cilmi nafsiga ee jaamacadda KU Leuven ee dalka Biljamka, xaaladahan oo kale oo qofka isku maleynaayo xaywaan waa mid dhif iyo naadir ah, waxa ayna qofka heyn kartaa saacado ama sanado, waxaana sababa isku dhaxyaac xagga maskaxda ah.